Zvemutemo Ziviso uye mamiriro ekushandisa ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
1 Chiziviso chepamutemo nemamiriro ekushandiswa
1.1 Chinangwa chewebsite ino
1.2 Kushandiswa kwewebhu
1.3 Zvinodiwa neMushandisi
1.4 Dziviriro yedata uye Chengetedzo Yakavanzika
1.5 Arco kodzero yekushandisa
1.7 Ruzivo nezvigadzirwa zveindasitiri kodzero
1.8 Zvekunze Zvinongedzo
1.9 Kubviswa kwevimbiso uye mutoro
1.10 Mutemo unoshanda uye kutonga
1.11 udza mashoko
Kana iwe wasvika pano, ndezvekuti une hanya nezvekuseri kweiyi webhusaiti uye mazwi mandinosarudza kutaurirana newe uye iyo inhau huru kwandiri, semutoro webhusaiti ino.
Chikonzero cherugwaro urwu ndechekutsanangura zvakadzama mashandiro ewebsite ino uye kukupa iwe ruzivo rwese rwune hukama nemunhu ari kutarisana nechinangwa chezvakanyorwa mukati mariri.
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuziva kuti ndiani anobatsira webhusaiti ino. Mukuteerera Mutemo 34/2002, waChikunguru 11, pamisangano yenharaunda yeruzivo uye kutengeserana kwemagetsi, inokuzivisa iwe:
• Basa rezvemagariro ndere: Webhu inoshambadzirwa munzira dzinoverengeka dzekushambadzira kwepamhepo.
• Ipa zvemukati zvine chekuita nebasa reInternet Kushambadzira.
• Tonga runyorwa rwevanonyorera bhurogu uye zvakapetwa maoni.
• Tonga zviri mukati uye zvemashoko emasevhisi anopiwa.
• Tonga chinetwork chevakabatana navo.
• Sika yako wega uye wechitatu bato masevhisi.
Paunenge uchishandisa webhusaiti yeDiscover.online, Mushandisi anobvuma kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dzekuwana.online kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwandisa webhusaiti yekutsvaga online kana izvo zvaizodzivirira, neimwe nzira, zvakajairika kushandiswa kwewebhu.
Discover.online inotora matanho akakwana ekudzivirira kuti aone kuvepo kwehutachiona. Zvisinei, Mushandisi anofanira kuziva kuti matanho ekuchengetedza emakomputa paInternet haana kuvimbika zvachose uye kuti, nekudaro, kuwana.online haigone kuvimbisa kusavapo kwemavirusi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera shanduko mumakomputa masystem. (software ne Hardware) yeMushandisi kana mumagwaro avo emagetsi uye mafaera arimo.
Chero zvazviri, zvinorambidzwa kuti VANOSHANDISA (kukwanisa kubvisa zviri mukati uye zvirevo izvo zvinoona zvakakodzera) maitiro anosanganisira:
• Chengeta, shambadza uye / kana kuendesa data, zvinyorwa, mifananidzo, mafaera, zvinongedzo, software kana zvimwe zvinhu zvinorambidzwa zvinoenderana nemitemo inoshanda, kana maererano nekufungidzira kweunowana.online yekuve zvisiri pamutemo, zvechisimba, kutyisidzira, kushungurudza, kusvibisa, zvinonyadzisa, zvinonyadzisa, rusaruraganda, xenophobic kana zvimwe zvinopesana kana zvisiri pamutemo kana izvo zvinogona kukuvadza chero mhando, kunyanya zvinonyadzisira.
Sewe mushandisi, iwe unoudzwa kuti kupinda kune webhusaiti iyi hazvireve, munzira chero ipi, kutanga kwehukama hwehukama neInternet servicios Telemáticos SL nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa webhusaiti, masevhisi ayo uye zvirimo pasina kupokana mutemo weazvino, kutenda kwakanaka uye ruzhinji. Zvinorambidzwa kushandisa webhusaiti izvi zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza, kana izvo, munzira chero ipi zvayo, zvinogona kukonzera kukuvara kana kudzivirira kushanda kwewebhu webhusaiti.
Nezve zviri mukati mewebsite ino, zvinorambidzwa:
• Kubereka kwavo, kugovera kana kuchinjisa, zvizere kana muchikamu, kunze kwekunge vatenderwa nevaridzi vazvo;
• Chero kutyorwa kwekodzero dzemupi mupi kana kwevaridzi zviri pamutemo;
• Kushandiswa kwayo kwezvinangwa zvekushambadza kana zvekushambadza.
Online servicios Telemáticos SL inovimbisa zvakavanzika zveruzivo ruzivo rwakapihwa neUSERS uye kurapwa kwavo zvinoenderana nemutemo uripo mukudzivirira kwega data, watora huwandu hwechengetedzo hwekudzivirirwa kwepamutemo yedata data.
Online servicios Telemáticos SL yakazvipira kushandiswa kweiyo data inosanganiswa mune iyo faira "WEB Users uye SUBSCRIBers", kuremekedza kuvanzika kwavo uye kuvashandisa maererano nechinangwa cheyowo, uyezve kutevedzera kwavo kwavano chengetedza uye kugadzirisa zvese matanho ekudzivirira shanduko, kurasikirwa, kurapwa kana kuwana zvisiri pamvumo, zvinoenderana nezvakapihwa weRoyal Decree 1720/2007 yaDecember 21, iyo inobvumidza iyo Mitemo mukuvandudzwa kweOrganic Law 15/1999 ye13. December, Dziviriro Yeyako data.
Mushandisi anogona kurovedza muviri, zvine chekuita nedatha yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Kuti ushandise kodzero idzi, mushandisi anofanira kunyora uye kusaina chikumbiro chavanogona kutumira, pamwechete nekopikopi yeID yavo kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yeInternet Servicios Telemáticos SL (kureva, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) kana neemail, yakanamatira kopi yeDNI ku: info (at) discover.online. Pamberi pemazuva gumi, chikumbiro chichapindurwa kuratidza kusimbiswa kwekodzero yawakakumbira kushandisa.
Online servicios Telemáticos SL inozivisa kuti kune mafomu ekunyunyuta anowanikwa kune vashandisi uye vatengi.
Mushandisi anogona kutora zvikumbiro nekukumbira fomu yavo yekukumbira kana nekutumira email kuinfo (pa) discover.online inoratidza zita rako uye zita, zita rebasa kana chigadzirwa chakatengwa nekutaura zvikonzero zvekuda kwavo.
Iwe unogona zvakare kunongedza chikumbiro chako netsamba ku: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) uchishandisa, kana uchida, fomu inotevera yekudai:
Kuti unzwe nezve: Online servicios Telemáticos SL
C / Blas de Otero º16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
E-mail: info (pa) discover.online
• Zita reMushandisi:
• Yekushandisa kero:
• Mushandisi siginicha (chete kana ikapihwa pabepa):
• Chikonzero chekubvunza:
Kubudikidza neaya Mamiriro Ezvinhu, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zveindasitiri zvinopihwa pawebhusaiti Discover.online, huchenjeri hwavo ndehwe Online Servicios Telemáticos SL, Mushandisi ari kurambidzwa pachena kubereka, shanduko, kugovera, kutaurirana neruzhinji, kuitirwa ruzhinji. , kuburitsa, kushandisazve, kutumira kana kushandisa chero hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi?
Mushandisi anoziva uye anogamuchira kuti iyo webhusaiti yese, ine pasina kudzika zvinyorwa, software, zviri mukati (kusanganisira chimiro, kusarudzwa, kurongeka uye kuratidzwa kwakafanana) mafoto, audiovisual zvinhu uye mapikicha, inodzivirirwa nezviratidzo, zvinyorwa. uye dzimwe kodzero dziri pamutemo dzakanyoreswa, zvinoenderana nezvibvumirano zvepasi rose izvo Spain mubato uye mimwe kodzero yepfuma nemitemo yeSpain.
Muchiitiko icho mushandisi kana wechitatu achifunga kuti pane kutyorwa kwekodzero yavo yepamutemo kodzero nekuiswa kwechimwe chinhu paWebhu, ivo vanofanirwa kuzivisa vakati mamiriro ezvinhu paInternet servicios Telemáticos SL inoratidza:
• Ruzivo rwemunhu wemunhu anofarira muridzi wekodzero anofungidzirwa kuti akatyora, kana kuratidza chinomiririra chaanoshanda nacho kana nyaya yacho yaunzwa nemumwe wechitatu asiri iye anofarira.
Ratidza zviri mukati zvakadzivirirwa neuchenjeri kodzero dzenzvimbo uye nzvimbo yazvo paWebhu, kubvumidzwa kwekodzero dzepfuma kodzero dzakaratidzirwa uye chirevo chakaziviswa mukati umo anofarira anoita basa rechokwadi rezivo rakapihwa mune ziviso.
Online servicios Telemáticos SL haina kupa chero vimbiso uye haina mhosva, mune chero mamiriro, kukuvadzwa kwe chero mhando inogona kukonzera:
• Iko kushayikwa kwekuwanikwa, kugadzirisa uye kushanda kwakanaka kwewebsite kana masevhisi ayo uye zvirimo;
• Kuvapo kwehutachiona, zvirongwa zvakashata kana zvinokuvadza zvirimo;
• Isiri, isina hanya, yekubiridzira kana kupesana neChiziviso cheMutemo ichi;
• Iko kushayikwa kwemasimba, mhando, kuvimbika, kubatsira uye kuwanikwa kwemasevhisi akapihwa nevanhu vechitatu uye kwakaitwa kuti vashandiswe pane webhusaiti.
Mupi wacho haapiwi mutoro pasi pemamiriro ezvinhu chero api zvawo nekuda kwekukuvara kunogona kuitika kubva mukushandiswa zvisiri pamutemo kana zvisiri izvo webhusaiti ino.
Kazhinji, hukama huri pakati peonline.nevashandisi vevashandisi vayo vepa telematic, varipo pane ino webhusaiti, vari pasi pemitemo yeSpanish nemasimba uye kuMatare eGranada.
Muchiitiko chekuti chero Mushandisi aine chero mibvunzo nezve ichi chiziviso chepamutemo kana chero chirevo nezve webhusaiti Discover.online, vanogona kuenda kuinfo (pa) discover.online
Discover.online inochengetera kodzero yekushandura, chero nguva uye pasina ziviso isati yaitika, mharidzo uye kumisikidzwa kwewebsite Discover.online, senge ichi chiziviso chepamutemo.